PARIS: Kumannaan usoo dibed-baxay macallinkii loo bireeyay sawir-gacmeedka nabi Muxammad (NNKH) – Calanka.com
in Dibedda — by admin —	October 18, 2020
Kumannaan shacab ah ayaa maanta dibed-bax baroordiiq ah u sameeyay macalli Samuel Paty kaas oo galabnimadii jimcaha uu bireeyay wiil 18 jir muslim ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Ruushka.
Dadkan ayaa isugu soo baxay barxadda caanka ah ee Place de la République, waxaana ay dibedbaxayaashu siteen sawirka macallinka iyo fiyoorayaal, waxaana loo qaaday heeso.
Dibedbaxa ayaa waxaa ka qeyb galay ra`iisal wasaaraha dalkaasi Jean Castex.
Macallinka ayaa lagu gowracay bannaanka iskuulkii uu wax ka dhigayay oo ku yaal magaalo duleedka Paris ku taal.
Samuel Paty, oo 47 jir ahaa, ayaa dilkiisa loo aaneynayaa in uu ardaydiisa tusay dhowr jeer sawir gacmeed laga sameeyey Nebi Maxamed NNKH, waxaana gowracay wiil 18 jir ahaa oo asal ahaan kasoo jeeda Jamhuuriyadda Chechnya ee Ruushka. Wiilkan ayaa waxaa markii dambe toogasho ku dilay booliska.